एक परिवारले घरमै जम्मा गर्‍याे १३ सय लिटर पिसाब, यस्ताे छ कारण ! « गोर्खाली खबर डटकम
एक परिवारले घरमै जम्मा गर्‍याे १३ सय लिटर पिसाब, यस्ताे छ कारण !
एजेन्सी । कुनैकुनै समय मानिसको चाहना पनि अजिबको हुन्छ । कसैले नसोचेको काम गरिरहेको हुन्छ । यस्तै भएको छ एक परिवारसँग । उनीहरुले आफ्नै पिसाब एक वर्षसम्म बोतलमा जम्मा गरेर राख्दा १३ सय लिटर संकलन भएकाे छ ।
कजाकिस्तानमा एक परिवारले आफ्नो फ्ल्याटमा एक वर्षदेखि पिसाब जम्मा गर्दा ३ सय ग्यालीन अर्थात १३ सय लिटर जम्मा भएकाे छ। उनीहरुका छिमेकीले दुर्गन्ध सहन नसकेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । जसबाट उनीहरुले पिसाब जम्मा गरेको पत्ता लागेको थियो ।
कजाकिस्तानको अकताउ सहरमा झेन्या र उनको परिवारले यस्तो कार्य गरेको हो । झेन्या र उनका आमाबुबाले आफ्नो फ्ल्याटमा १ वर्षमा १३ सय लिटर पिशाब जम्मा गरेका हुन् ।
छिमेकीले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि उनिहरुको घरमा पुगेको प्रहरीका लागि ढोका नखुलेपछि ढोका फुटाएर प्रहरी भित्र प्रवेश गरेको थियो । उनीहरुको फ्ल्याटमा १ वर्षदेखि पानी र विजुलीको बिल नतिरेकाले कनेक्सन काटिएको थियो ।
त्यसपछि प्रहरीले झेन्या र उनको परिवारलाई मानसिक अस्पताल पठाएको थियो । सरसफाई कर्मचारीले फ्ल्याटको सरसफाई गरेका थिए । त्यहाँबाट भारीमात्रामा रहेका सडेगलेका कपडा र १३ सय लिटर पिशाब पनि हटाइएको छ ।